नचल्ने पानी र नटिपिने फूल- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
नचल्ने पानी र नटिपिने फूल
‘मैले छोएको पानी चल्दैन’, ‘म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउँछु’ जस्ता चर्चित गीतका गायक हुन् यशकुमार । यी गीतले जे भाव बोल्छन्, त्यस्तै किसिमका फिल्म निर्माण गरेर पनि चर्चित छन् उनी ।
वैशाख १८, २०७३ पर्वत पोर्तेल
ले छोएको पानी चल्दैन...’ बाट पचासको दशकको अन्त्यतिर यशकुमार एकाएक चर्चामा आए ।
तर, त्यसलगत्तै सिडी क्यासेटहरू बिक्न छोडेर संगीत बजार नै एफएममा सीमित हुन थालेपछि उनी पनि पेसा परिवर्तन गर्ने सोचमा पुगे । गीति क्यासेटहरू बिक्न छाडेका थिए, गीतबाट आम्दानी हुन छोडेको थियो ।
नयाँ पेसाका रूपमा उनले रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सुरु गरे । गायक बाबु बोगटी, राजेश घतानी र अशोक दर्नालसँग मिलेर ‘रिदम प्यालेस’ नामको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरे । राम्रै चल्यो पनि । आम्दानी पनि मनग्गै हुँदैथ्यो । तर, डनहरूले वाक्क दिक्क पारे । करिब वर्ष दिन चलाएर रेस्टरेन्ट बेचे ।
रेस्टुरेन्ट व्यवसाय छाडेपछि यश लगभग बेरोजगारझैं बने । त्यही बेला ‘बाटोमुनिको फूल’ नामको गीति एल्बम निकाल्ने सोच बनाए । तर, साथीभाइहरूबाट एल्बम अब चल्दै चल्दैन भन्ने सल्लाह पाए । त्यही शीर्षकमा उपन्यास लेख्ने पनि सोचे । ‘झन्डै उपन्यासकार पनि भइयो,’ कालो चिया सुक्र्याउँदै उनले भने, ‘प्लटहरू तयार पार्दै थिएँ फेरि तिनै साथी भाइले उपन्यास लेखेर कतिजनाले पढ्छन् ? कसले पढ्छ ? भन्ने कुरा आएपछि छाडें ।’
त्यसपछि पलायो अर्को सोच– यो शीर्षकमा फिल्म बनाउने । नजिकका मित्रहरूको सुझाव पनि सकारात्मक पाए । फिल्म त बनाउने तर कसरी ? उनको मथिंगल लामै समय ततायो । हिरो, हिरोइन र निर्देशक छान्ने कुराले धेरै समय खायो । कलाकार विल्सनविक्रम राईले दिलीप रायमाझीको नाम लिए । दिलीप पनि निर्देशन गर्न तयार भए । फिल्मका लेखक सुरज सुब्बा नाल्बोले अभिनेतामा यशकुमार र बाबु बोगटीलाई नै अघि सर्न सुझाव दिए । उनीहरू तयार भए तर अन्तिम समयमा दिलीप पछि हटे । ‘उहाँले यो कथामा मैले न्याय गर्न सक्दिनँ, अलि नाम चलेको निर्देशक लिनुस् भन्नुभयो,’ उनले भने । अनि ‘हाउडे’ र ‘अंशबन्डा’ जस्ता दुई फ्लप फिल्मका निर्देशक सुरज सुब्बा नाल्बो नै निर्देशक बने ।
फिल्मले राम्रो चर्चा पायो । तर, पाइरेसी र आन्तरिक द्वन्द्वले थोरै समस्या भयो । लेनदेनले राम्रा साथीहरू पनि दुश्मन बने । यो फिल्मको सफलतापछि निर्देशक नाल्बो चल्तीका निर्देशक बने । यशकुमारलाई पनि १० वटा जति फिल्मबाट अफर आयो । उनले ‘आधीबाटो’जस्ता केही फिल्ममा मात्रै अभिनय गरे । ६ वर्षपछि ‘बाटोमुनिको फूल–२’ बन्यो । नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछूतजस्तो विभेदजन्य अपराध फिल्मको मुख्य ‘थिम’ हो । अन्तरजातीय बिहे गरेर गाउँबाट विस्थापित जोडीको कथा फिल्मले भन्छ ।
अझै पनि हाम्रा गाउँघरमा बाटोमुनिको फूल प्रयोग गरिन्न । बाटोमाथि फूलेको फूललाई मात्रै प्रयोग गरिन्छ । बाटोमुनिको फूल अछूत हो भन्ने मान्यता अझै ज्युँदै छ । बाटोमुनिको फूल शुभकार्यमा प्रयोग हँुदैन, न त उपहार नै दिइन्छ । शिरमा पनि सजाइन्न । बाटोमुनिको फूललाई कसैले नटिप्दा बर्सेनि ओइलाएर जान्छ ।
काभ्रेको एउटा गाउँ । रामप्रसाद नेपाल गाउँमा खुङ्खार गीताङ्गे । त्यही गाउँकी गीता परियारको आवाज पनि कोइलीको जस्तै । गाउँमा नाचगान हुँदा गाउँलेले भनिहाल्थे रे, राम र गीतालाई बोलाउन बिर्सनु हुन्न है । गाउँदै नाच्दै हिँड्ने क्रममा उपाध्याय बाहुनका छोरा रामप्रसादको कथित दलित समुदायकी गीतासँग प्रेम बस्यो । राम र गीतको सम्बन्धको चर्चा गाउँमा भुसको आगोझैं फैलियो । अन्तत: रामले गीतालाई भगाए । त्यो समयमा अन्तरजातीय बिहे गर्न सानोतिनो मुटु भएकाले सक्ने कुरै भएन । तर, राम र गीतले साहस गरे । गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था थिएन । गाउँबाट भागे ।
बौद्ध स्तूपाको घर २ सयमा बेचेर सर्लाहीको कर्मैया वागमती पुगे । २०३५ साल मंसिर १ गते त्यही जन्मिए यशकुमार ।
२०४५ सालमा आएको भीषण बाढीले वागमती किनारका धेरै परिवार विस्थापित भए । यशकुमारको परिवार पनि विस्थापित भयो । जायजेथा बगाएपछि काठमाडौं बसाइ हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यो बेला भर्खर १० वर्ष टेकेका यशकुमार नोस्टाल्जिक बन्छन्, ‘बाढीले केही बाँकी राखेको थिएन । केही नभएपछि बसाइ हिँड्नुको विकल्प थिएन ।’
गाउँमा हुँदादेखि नै गीत संगीतप्रति उनको रुचि थियो । हिन्दी फिल्मका फ्यान । मिथुन चक्रवर्ती उनका ‘आइडल’ थिए । मिथुनका फिल्ममा देखाइने बूढी आमा, अभाव र हिरोलाई आइपर्ने समस्याजस्ता दृश्य यशलाई आफ्नैजस्तो लाग्थ्यो । ‘फिल्ममा मिथुनले जुन तरिकाले संघर्ष गरेर सर्भाइव गथ्र्यो म पनि यस्तै गर्छु भन्ने लाग्थ्यो । मेरो आफ्नो कथाजस्तो लाग्थे मिथुनका फिल्महरू ।’
काठमाडौं आएपछिको केही समय उनले नाटकमा बिताए । बाँसुरीको ब्याक ग्राउन्ड म्युजिक पनि बजाए । बालुवा चाले । प्रेसमा किताब छापे । ज्यामी भएर इँटा–ढुंगा बोके । ड्राइभरसँग मिलेर कोठा सार्ने काम गरे । यी सबै काम गर्दा पनि उनी गीत गुन्गुनाइरहन्थे ।
२०५२ सालतिर राजु श्रेष्ठ नामका एकजना साथीले उनलाई चितवनको टाइगर टप्स होटल पुर्‍याए । प्रत्येक शुक्रबार त्यहाँ गाना–बजाना हँुदोरहेछ । साथीले यशलाई पनि गीत सुनाउन जोड गरे । होटलमा ६–७ जना भारतीय पर्यटक थिए । उनीहरू खानामा ढुंगा भेटियो भनेर होटलवालासँग विवाद गर्दै थिए ।
सबैको आग्रहअनुसार रामकृष्ण ढकालको ‘मीठामीठा कुरा सबै सुनाइदिऊँ कि हजुर’ पहिलोपटक सुनाए । सबैले ताली पिटेर हौसला बढाए । कुमार सानु त्यो बेला ज्यादै हिट थिए । उनको एउटा गजल ज्यादै लोकप्रिय थियो, ‘किसी की याद सताए सराब पिलेना’ । उनले यो गीत पनि गाए । गाइसकेपछि सबैले ताली बजाए । अघि होटलवालासँग विवाद गर्ने समूहका एकजना (जसले सेतो पाइजाम र कुर्ता लगाएका थिए) ले चासो दिएर हेरेर भने, ‘एक और हो जाए ।’
पुरानो हिन्दी फिल्म ‘प्रेमगीत’ को ‘होठों से छु लो तुम...’ भन्ने जगजित सिंहको लोकप्रिय गजल गाए । सबैले तारिफ गरे ।
पाइजाम लगाएका दुईजना मान्छे हिँड्दै उनको छेउमा आए । त्यसमध्येका एकजनाले राम्रो गाइस । प्रस्ट गाइस् । म्युजिक सिकेको छस् ? भनेर सोधे । ती व्यक्तिले पुन: सोधेछन्, ‘तँलाई केही बन्ने इच्छा छ ?’ यशले ‘छैन, गायन मेरो सोख मात्रै हो’ भने ।
भोलिपल्ट ती भारतीय पर्यटकहरूको चेक–आउट रहेछ । होटलका म्यानेजरले के भने यिनीहरूले ? भनेर सोधेछन् । यशले भनेछन्, ‘मेरो तारिफ गरे राम्रो गाउँदो रहेछन् भनेर गए ।’ म्यानेजरले थपे, ‘त्यो सेतो कुर्था पाइजाम लगाउने मान्छे पनि इन्डियाको पपुलर गायक पो हो रे त ?’ यशले पुन: सोधेछन्, ‘ए हो र । के नाम रछ तिनको ?’ म्यानेजरले जगजित सिंह रे भन्दा उनी तीन छक्क परे । उनीसँग अर्का एक पुरुष र महिला पनि थिए । ‘उनीहरू अनिल अम्बानी र टिना मुनिम रहेछन्,’ उनले सम्झिए । काठमाडौं फर्किएर साथीहरूलाई जगजित सिंहसँगको भेट सुनाउँदा कसैले पत्याएनन् ।
यशकुमारले पहिलो गीत गाए, ‘हाँसो मागे तिमीसँग आँसु पो दियौ...।’ तर चलेन । कामकै सिलिसिलामा रमेश खड्कासँग भेट भयो । उनकै पहलमा ‘आस्था’ एल्बम निकाले । रामकृष्ण ढकाल, यम वराल, कुन्ती मोक्तान, विवेक श्रेष्ठ, सपना श्रीलगायत चर्चित गायकहरूलाई लिएर । त्यो पनि चलेन ।
दोस्रो ‘उमेर’ एल्बमको गीतले पनि श्रोतालाई छोएन । ‘त्यो गीत नचल्नुको कारण तीनताका पप गीतको प्रभाव ज्यादा थियो,’ यशकुमार सम्झन्छन्, ‘नवीन के भट्टराई, कर्ण दासहरूको समय थियो ।’
यो आधुनिक एल्बमको प्रभावकारी समय होइन भन्ने लाग्यो उनलाई । संगीतलाई परिमार्जन गर्ने तरखर गरे । तामाङ भाषाका गायक चन्द्र दोङको साथमा कलेक्सन एल्बम ‘यो संसार’ निकाले ।
‘मैले छोएको पानी चल्दैन...’ बोलको गीत थियो । कुनै गायकले गाउन मानेनन् । कसैले नगाउने भनेपछि एल्बममा समावेश नहुने सम्भावना बढ्यो । एरेन्जरले ‘अरूले गाउँदैनन् भने तिमी आफैं गाऊ, तिम्रो पनि स्वर राम्रै छ’ भने । यशले मानेनन् । किनकि यशको इच्छा यो गीत नाम चलेकै गायकले गाइदिओस् भन्ने थियो । यो बेलासम्म उनी संगीतकार मात्रै थिए । कसैले गाउन नमानेको गीत गाएर उनी गायक बने ।
चलन के थियो भने राम्रा गीतहरू एल्बमको ‘ए’ साइडमा र नराम्रा झुर गीतहरू ‘बी’ साइडमा त्यो पनि अन्त्यतिर राख्ने । ‘मैले छोएको पानी चल्दैन’ र ‘यो मनले तिमीलाई नै रोजेको छ’ दुवै गीत एल्बमको ‘बी’ साइडको अन्तिम पंक्तिमा परे ।
एल्बम रिलिज भयो । यसले पनि खासै प्रभाव पारेन । म्युजिक भिडियोको क्रेज बढ्दै थियो । आलोक नेम्बाङ हिट निर्देशक थिए । एल्बममा भएको खेमराज गुरुङको ‘बेहाल भयो जिन्दगी यो...’ बोलको गीतको भिडियोचाहिँ चल्ला भन्ने अनुमान थियो । त्यही गीतको भिडियो बन्ने भयो ।
इमेज च्यानलकी संगीता श्रेष्ठले निर्देशन गर्ने निधो भो । तर, पुरुष मोडल पाएकी थिइनन् संगीताले । संयोगले यशकुमारलाई मोडल बन्न अनुरोध गरिन् । अनि यशकुमार मोडल बने । मोडलिङ अघि उनी सुरेशकुमार नेपाल परियार थिए । संगीताले नै सुरेशकुमारलाई यशकुमार भनेर न्वारन गरिदिइन् ।
नयाँ बजारमा भिसिडी पसल थियो यशको । एल्बम रिलिज भएको करिब २–३ महिनापछि भिसिडी पसलमा बसिरहेका थिए । एकजना मान्छे आएर यशकुमार भनेको तपाईं नै हो भनेर सोधे । ती मान्छे सिक्किमका विजय थापा थिए । नेपालमा कतै नसुनिएको यशकुमारको ‘मैले छोएको पानी चल्दैन’ ले मेचीपारि तहल्का मच्चाएको रहेछ । सिक्किममा कन्सर्ट गर्न यशलाई खोज्दै आएका रहेछन् ।
४५ हजार भारुमा यशले सिक्किममा पहिलो कन्सर्ट गरे । ‘मैले छोएको पानी चल्दैन’ गीत यति हिट रहेछ कि ८ पटकसम्म गाउँदा पनि ‘वान्स मोर’ रोकिएको थिएन ।
दुई गीतको चर्चापछि कम्पनीले सोलो एल्बम प्रस्ताव गर्‍यो । अघिल्लो एल्बमका ती दुई गीत ‘रिजन’ एल्बममा पुन: समावेश गरे । एल्बम रिलिज भएको १३ दिनपछि दरबार हत्याकाण्ड भो । गीत संगीत बन्दै भयो । रेडियो टीभीमा तानपुरा मात्रै बज्थ्यो ।
उनी निराश भए । तर, बिस्तारै त्यो गीत बस, ट्याक्सी र रेस्टुरेन्टहरूमा बज्न थाल्यो । नेपालबाट मेची तरेको गीत पुन: मेची तरेर नेपालै फर्कियो । जसले निकै लामो समय तहल्का मच्चाइरह्यो ।
लगत्तै ‘तिर्खा’ रिलिज भो । ‘म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउँछु’, र ‘हिजो अर्कैसँग देखें’ जस्ता गीतले बजार पिटे । यशको क्रेज रातारात बढ्यो ।
संगीतमा दोस्रो इनिङमा चलेका यशकुमार फिल्ममा पनि सिक्वेल लिएर दोस्रो इनिङ खेल्न आएका छन् । हेरौं, यसमा उनले कस्तो सफलता पाउँछन् !
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७३ १०:४९
साइँलाको चुइगम जिन्दगी
वैशाख १८, २०७३ देवेन्द्र भट्टराई
कुनै पढाइगुनाइ वा अक्कलका भरमा होइन, थोरै मुढे बल र धेरै लगनका कारण आज भारतको हिमाञ्चल राज्यभर चिनिएका छन्— साइँला लामा ।सिन्धुपाल्चोकको गुम्बा गाविसमा पर्ने अभ्यन्तरको गाउँ तेम्बाथाङमा ५० वर्षअघि जन्मे–हुर्केका साइँलाले न कुनै विद्यालय जान पाए, न बाह्रखरी नै चिने ।
कुनै पढाइगुनाइ वा अक्कलका भरमा होइन, थोरै मुढे बल र धेरै लगनका कारण आज भारतको हिमाञ्चल राज्यभर चिनिएका छन्— साइँला लामा ।सिन्धुपाल्चोकको गुम्बा गाविसमा पर्ने अभ्यन्तरको गाउँ तेम्बाथाङमा ५० वर्षअघि जन्मे–हुर्केका साइँलाले न कुनै विद्यालय जान पाए, न बाह्रखरी नै चिने । जन्मेर ६ महिनाको नहुँदै आमा गुमाएपछि साइँला अरूकै काखमा पुगे, थाहा पाएदेखि एक्लो र बाहिरियाझैं बनेर उनी हुर्किए ।
कथाहरूमा जस्तै बुहार्तनको लेखान्त बेहोरे, साइँलाले । सौतेनी आमाको सौतेलो बेहोरा, घरमा छाकैपिच्छे मकै भुटी खानुपर्ने दैनिकी र सधैंको हाहाकारमाझ पूरै झट्टी बनेर हुर्किए साइँला । कहिले घाँसपात गएर, कहिले जंगल–दाउरा धाएर र कहिले गाउँले जुकुल हिमालसम्म पदयात्रु बनेर आएका विदेशीको झोला बोकिदिन दौडिएरै उनको बालापन बित्यो ।
साइँलालाई ठ्याक्कै साल याद छैन, तर उनले तेम्बाथाङ गाउँ छाडेको सालाखाला ३२ वर्ष पुगेछ । साइँलाअघि, सात दाजुभाइमध्येका जेठा जाङ्वु र माइला नवाङ् कामदामको खोजीमा घरबाट बाहिर निस्किएका रहेछन् । सिन्धुपाल्चोकजस्तै चिसो पहाडी बस्तीमा ‘ढुङ्गामाटाको काम खुलेको छ अरे’ भन्ने सुनेर तेम्बाथाङबाट १० दिनको बाटो नाघेर जाङ्वु र नवाङ् हिमाञ्चल आएका रहेछन् । त्यही लर्कोमा केही वर्षपछि साइँला पनि यतै आए । हिमान्ञ्चलको राजधानी मनाली आइपुग्दा यी दाजुभाइले तेम्बाथाङजस्तै हावापानी र मिल्दो भूगोलका कारण चाँडै घुलमिल हुन सिकेका रहेछन् ।
‘सुरुमा ज्यालादारी काम गर्न थालेको थिएँ । ढुङ्गा फोर्ने, बोक्ने, सडक मिलाउने, नाली खन्ने सबै काम गर्नैपथ्र्यो । जंगलमा पानीको पाइप बिछ्याउने कामसमेत थियो । रूख रोप्ने, झोलुङ्गे पुल बनाउने काम पनि आइपथ्र्यो,’ आफ्ना संघर्षका दिन सम्झँदै साइँला भन्छन्, ‘ज्यालादारीमा दिनको अढाई रुपैयाँ पाइन्थ्यो, त्यही पनि मनग्ये हुन्थ्यो ।’ सीप र दक्षता नभए पनि मुढेबलकै भरमा सुरुका दिनमा काम थाल्नुपरेको साइँला अझै सम्झन्छन् । तर, साइँलाजस्तै नेपालका गाउँबस्तीबाट आएका थुप्रै सिकारु दाजुभाइ भनिरहेका हुन्थे, ‘मरता, क्या नहीं करता ।’
अनि साइँला पनि त्यही ‘मरता’को ताँतमा धक नमानी उभिएका हुन्थे ।
दैनिक ज्यालादारीमा झन्डै ५ वर्ष जति काम गरेपछि सन् १९८७ मा साइँलाले अलिक गतिलो काम भेटे, ढुङ्गामाटाकै काम भए पनि दैनिक १२ रुपैयाँ ज्याला पाइने पब्लिक–वर्क डिपार्टमेन्ट (पीडब्लुडी) को काम । नेपालको सडक विभागजस्तो यो सरकारी अड्डालाई यतातिर पीडब्लुडी भनेर चिनिन्छ । यो अड्डामा पुगेपछि साइँलाले हिमाञ्चलभित्रको कुनाकाप्चा देखे, ले–लद्धाखसम्मका सडकका नापनक्सा पहिल्याए । नाली खन्ने वा ढुङ्गा छाप्ने काम भए पनि कसरी स्थायी हुने, कसरी अलिक ढुक्कको जीवन निर्वाह गर्ने र कसरी आफूजस्तै अरू नेपालीको हितमा उभिने भन्ने ध्याउन्न साइँलाका मनमा गढिरहन्थ्यो । काम थालेको १० वर्षमा साइँला स्थायी भए, कानुनी लडाइँ लड्नासाथै साइँलाजस्तै अरू थुप्रै नेपाली पनि स्थायी भए ।
‘नेपाली नागरिकताका भरमा जागिर पाएको र खाएको भनेर हेप्न कहाँ पाइन्छ र ?’ साइँलाले झिकेको कानुनी–तरक्की थियो, ‘भारतीय फौजी (गोर्खा रेजिमेन्ट) मा नेपाली नागरिकताकै भरमा हजारौं नेपालीले काम पाएका छन्, उनीहरूको पेन्सन पाकेको छ भने अरू काममा त्यही नागरिकता किन नचल्ने ?’ नभन्दै सन् १९५० को मैत्री सन्धिको ‘समान हक–अधिकारको सूत्र’ र गोर्खा फौजको भर्ती कुरोले राज्य अदालतमा पनि नेपाली कामदारकै जित भयो । यो जितको सूत्रधार बनेर उभिएका वकिल अश्विनीकुमार गुप्ताले नेपालीका निम्ति नसोचेको साथ/सहयोग दिलाए । यसरी सन् २००५ मा फेरि पीडब्लुडीका झन्डै ४ सय नेपाली कर्मचारी फेरि स्थायी भए । साइँलाका अनुसार, पीडब्लुडीअन्तर्गत अहिले कुल्लु जिल्लामा मात्रै ३ सय ९० र पूरै हिमाञ्चलमा ८ सय ५० नेपाली कामदार स्थायी छन् ।
यही अड्डामा साइँला अहिले ‘मेड’ (अह्राइखटाइ गर्ने सडक निर्माण हाकिम) बनेका छन् भने उनकी श्रीमती पनि स्थायी लेबर छिन् । साइँला पीडब्लुडीले दिएको सरकारी क्वार्टरमा बस्छन् भने अबको केही वर्षमा पेन्सन–भत्ता थाप्दै तेम्बाथाङ गाउँतिरै फर्कने योजना बुनिरहेका छन् ।
साइँला अहिले मनालीको मालरोडस्थित मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका सल्लाहकार छन् । स्थानीय नगर प्रशासन र हिमाञ्चल राज्य सरकारसमेतको समर्थनमा नेपाली समाजले दुई वर्षयता राज्यमा आउने नेपाली नागरिकताधारीको जनगणना थालेको छ । कुल्लु, मनाली अथवा सिंगो राज्यमा रहेका नेपालीले समाजको अफिसमा आएर पञ्जीकरण गराउन सक्छन्, पञ्जीकरणपछि नगरपालिकाले दिने परिचयपत्र लिएर ढुक्कसँग नेपाली कामदार हिंडडुल गर्न सक्छन् । ‘यहाँ भारी बोक्ने काम होस् अथवा स्याउ टिप्ने र आलु/मटर रोप्ने काम नै किन नहोस्,’ उनले भने, ‘समाजमा दर्ता नभई न अस्थायी रासन कार्ड झिक्न सकिन्छ, न चरित्रको प्रमाणपत्र । यसका लागि नेपाली नागरिकता अनिवार्य गरेका छौं ।’ साइँलाका अनुसार हिमाञ्चलमा सिजनल रूपमा ३ महिनाजति स्याउ टिप्ने आउने नेपालीको संख्या ७ सय जति हुन्छ भने लाहुल जिल्लामा आलु/मटर रोप्न जाने र लेहमा घर बनाउने जाने डकर्मी पनि उत्तिकै हुन्छन् । साइँलाका अनुसार मनालीमा मात्रै ४ सयजना भरिया दर्तामा छन्, यसबाहेक २ हजारभन्दा बढी नेपालीको पञ्जीकरण भइसकेको छ ।
यसो भन्दैमा यो दोहोरो नागरिकता र पहिचान दिलाउने ‘पञ्जीकरण’ अभियान पनि होइन । परदेश बसिन्जेल अस्थायी हैसियतको रासन वा आधारकार्ड बनाउन अदालतले दिएको आदेशमा नेपाली नागरिकको पञ्जीकरण यहाँ थालिएको हो । ‘३ महिनादेखि ६ महिनासम्म काम खोज्दै भरिया बन्न वा स्याउ टिप्न आउने नेपालीका लागि दिने अस्थायी परिचयपत्रको कामले एकैसाथ नेपालीको जनगणना पनि भइरहेको छ,’ साइँला भन्छन् । त्यसमा पनि यी सबै पहिचानहरूमा ‘मूल नेपाली’ लेखिएकै हुन्छ, नेपाली दूतावास अथवा सरकारको निकायले आफ्नो नागरिकको स्थिति पहिचान गर्न/गराउन थाल्नुपर्ने काम हिमाञ्चलमा सुरु भएको दृष्टान्त आफैंमा उदाहरणीय छ— यस कामले पनि साइँलाको नाम राज्यमा चिनिएको छ । ‘हामीले पाउनुपर्ने हक, अधिकार अथवा पहिचान दिनमा ढिलाइ गरेको सुइको पाउनासाथ हामी अदालत गइहाल्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसकारण साइँलाको जरुरी काम भनेपछि अल्झाउने, पन्छाउने कुरै हुन्न ।’
मनाली छँदै, आँखैसामु साइँलाले फत्ते गराएको कामको उदाहरणसमेत देख्न पाइयो । दोलखा, सैलुङ–२ का ३९ वर्षे टेकबहादुर तामाङ हिमाञ्चलबाट चीन जोड्ने सुरुङमार्ग (रोथाङ टनेल) मा गाडीचालक थिए । गत वर्ष अक्टोबर अन्तिम सातामा सुरुङमार्गमा भएको दुर्घटनामा परेर तामाङको ज्यान गयो । तैपनि न क्षतिपूर्ति, न राज्यकोष सहयोगको अवस्था बनिरहेका बेला साइँलाकै पहलमा एकता समाजले राज्य अदालतमा मुद्दा हालेपछि गत साता मात्रै मृतक टेकबहादुरका परिवारले क्षतिपूर्ति पायो । टेकबहादुरकी श्रीमती कार्मी शेर्पा र उनीहरूका ३ छोराछोरीले राज्य तहबाट जनही १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम पाएका छन् भने टनेल कम्पनीले पनि नियमअनुसारको रकम दिइसकेको छ । साइँलाले दिएको साथ, सहयोग र सद्भावका निम्ति श्रीमती कामी शेर्पाले एकता समाजमा आएका सबैलाई चिया–कफी ख्वाउँदै सुनाइन्, ‘साइँला बडा नभाको भए खोइ के पो हुन्थ्यो होला र ? धन्नेबाद है, साइँला लामा ।’
साइँलाले ३० वर्षे उमेरमा बिहा गरे । चार छोराछोरी भए । मनालीमै तिनलाई पढाए, बढाए । आफूले नपढेपनि छोराछोरीलाई क्याम्पस तहको पढाइमा उनले पुर्‍याएका छन् । ‘अब धेरै वर्ष छैन यता, छोराछोरी लिएरै म गाउँ तेम्बाथाङ जान्छु,’ साइँलाको योजना छ, ‘छोरीलाई नजिकै सरकारी स्कुलमा मास्टर बन्न लगाउँछु, छोराले गाउँमै ट्र्याक्टर चलाएर अथवा सडक बनाउने ठेकेदारी गरेर गरिखान्छ ।’ सिन्धुपाल्चोक राजधानी चौताराबाट ३ दिन टाढा पैदलको आफ्नो गाउँ सम्झनासाथै साइँला हुरुक्क हुन्छन् । पोहोर भुइँचालो आउनासाथै सकेको राहत बोकेर गाउँ पुगे भने अघिल्लो महिना मात्रै सिंहदरबार छिरेर मन्त्रीहरूलाई भेट्दै आफ्नो गाउँको अविकासबारे आवाज उठाए ।
सिंहदरबार छिर्नुको किस्सा पनि उस्तै छ, साइँलासँग । गाउँबाट कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका नेतालाई भेला गरेर उनी सिंहदरबार पुगेछन् । कसोकसो प्रवेश अनुमति लिएर सुरुमै गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको अड्डासामु पुगेर ‘मन्त्री भेट्न आएको’ सन्देश पठाएछन् । स्वभावत: मन्त्रीका गार्डदेखि निजी सहायकले साइँलालाई रोक्ने नै भए । ‘भन्दिनु, माथि तेम्बाथाङबाट साइँला लामाको पार्टी आएको छ भनेर,’ साइँलाले हक्की बनेर भनेछन् । नभन्दै छिनभरमै भित्रबाट बोलावट आयो, अनि साइँलाले आफ्नो कथा–ब्यथा गृहमन्त्रीसामु सुनाउन भ्याएछन् । त्यही साइतमा सिंहदरबारमा उनले उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीदेखि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मलाई भेटेर तेम्बाथाङ् गाउँलाई नेपाल सरकारले हेला गरेकोमा गुनासो सुनाउन भ्याएका थिए । ‘सबै मन्त्रीले हुन्छ, हामी हेर्छौ भनेका छन् । हेरौं, अब के–कस्तो हेर्ने रहेछन्,’ थोरै मात्रै आशावादी बन्दै साइँलाले सुनाए । अब भने आफ्नै गाउँठाउँबाट दुईपटक सांसद बनेका नेता (अहिले वनमन्त्री) अग्नि सापकोटालाई भेट गर्ने इच्छा उनको छ । ‘साह्रै हेपेका छन् हाम्रो तेम्बाथाङलाई । अब भने अग्नि सापकोटासँग ‘टेबल–टकिङ’ गर्नु छ,’ उनले अर्को योजना सुनाए, ‘सुनौंला न, के भन्ने रहेछन् ।’
साइँलाको बुझाइमा, बितेको ३५ वर्षमा हिमाञ्चलमा आउने नेपालीहरू निकै कम मात्रै यतै अडिएका छन् भने धेरै आफ्नै घरतिर फर्किसकेका छन् । अनि आफ्नै जिन्दगीचाहिँ कस्तो लाग्छ त उनलाई ? यो जिज्ञासा राख्नासाथै साइँला मुस्कुराए । हिउँ झर्नैै लागेको मनाली, मालरोडको घुमाउने चौतारीमा बसेरै साइँलाले यसो जीउ मर्काई हेरे । ‘खोइ हओ पत्रकार भाइ, यो जिन्दगी भन्नु चुइगमजस्तो रैछ,’ सुनाए, ‘प्रेमिका, श्रीमती, सम्पत्ति सबै चुइगमजस्तै लाग्न थाल्यो अब त । गुलियो भने कहिले हो कहिले सकिइसको, तैपनि चबाउनै परो । अब त रस आउन पनि छाडिसक्यो, तैपनि खोस्टो चपाइरहेकै छु ।’
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७३ १०:४६
चीनकी इन्दिरा !
मनोरञ्जनात्मक शैक्षिक कक्षा
राष्ट्रिय खेलकुदका आधार
आहाराले दिएको सहारा
‘तसलिमा र शोभा डे ओभररेटेड’